व्यवसायीको प्रश्न : विदेशी पर्यटकलाई किन अङ्कुश लगाएको ? - योहोखबर
व्यवसायीको प्रश्न : विदेशी पर्यटकलाई किन अङ्कुश लगाएको ?
काठमाडौँ – पर्यटन व्यवसायीहरुले सबै किसिमका पर्यटन गतिविधिलाई निर्बाध रुपमा सूचारु गर्न दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
व्यवसायीले सबै व्यापार–व्यवसाय खुला भइसक्दा पनि सरकारले पर्यटन क्षेत्र खुला नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले देशमा दिनहुँ सभा, विरोध, जुलुस भइरहँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम नहुने तर विदेशी पर्यटक आउँदा जोखिम हुने कुरा हास्यास्पद भएको बताएका हुन् ।
ट्रेकिङ्ग एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका र कोभिड खोप लगाएर नेपाल आउने पर्यटकलाई निर्बाध घुम्न दिन माग गर्छन् ।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभलका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईँ पटकपटक आफ्ना माग राख्दा समेत सरकारले सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरे । उनले ७२ घण्टाको पीसीआर रिपोर्ट लिएर आउने विदेशी पर्यटकलाई अनिवार्य ५ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने प्रावधान हटाउन सुझाव दिन्छन् ।
गुरागाईँले कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीले अहिलेसम्म पुनर्कर्जा कोषको सुविधा नपाएको गुनासो गरे । सरकारले राहतको रुपमा कोष निर्माण गरे पनि पहुँच हुनेहरुले मात्रै सुविधा पाएको व्यवसायीको भनाइ थियो ।